लौ हेर्नुस्, आज यसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पहिलोपटक शितल निवास जाँदैछन् ! « Surya Khabar
लौ हेर्नुस्, आज यसरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पहिलोपटक शितल निवास जाँदैछन् !
काठमाण्डौ । केही समययता मुलुक र राष्ट्रियतामाथि खतरा बढेको भन्दै विभाजनकारी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न जनतालाई अपिल गर्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह सोमबार शीतलनिवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी छोरीको बिहेमा अतिथिका रूपमा आमन्त्रित गरिएका छन् । २०६३ सालयता राष्ट्रिय राजनीतिमाथि एकाधिकार जमाउँदै आएका राजनीतिक शक्तिहरूद्वारा पूर्वराजालाई गरिएको सामाजिक र राजनीतिक बहिष्कार समाप्तिको सुरुआत राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा गरिएको संकेतका रूपमा यसलाई राजनीतिक वृत्तमा बुझिएको छ ।
२०६५ जेठ १५ गते पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकमा राजसंस्था उन्मूलन भएको घोषणा गरी ज्ञानेन्द्र शाहलाई बिनाकुनै औपचारिक बिदाइ नारायणहिटी राजदरबार छाड्न बाध्य पारिएको थियो । त्यसपछि पूर्वराष्ट्राध्यक्षका रूपमा उनलाई कुनैपनि सम्मान उपलब्ध गराइएको थिएन । राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा पठाइएको कार्डमा उनलाई पूर्वमहाराजाधिराजकै हैसियतमा आमन्त्रण गरिएको स्रोतले बताएको छ । सोमबारको अन्नपूर्णले लेखेको छ, पूर्वराष्ट्रपति डा।रामवरण यादव सोमबार चौध महिनापछि शीतलनिवास प्रवेश गर्दैछन् । तर यसपटक उनी पूर्वराष्ट्रपति वा कुनै संवैधानिक हैसियतमा नभई राष्ट्रपति भण्डारीका कुटुम्ब (सम्धी) का रूपमा शीतलनिवास जान लागेका हुन् । उनी आफ्ना नाति अभिषेक यादवको जन्ती लिएर विवाह समारोहमा सहभागी हुनेछन् ।
जननेता मदन भण्डारी र गणतन्त्र नेपालकी दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकी कान्छी छोरी निशाकुसुमसँग रामवरणका नाति अभिषेकको विवाह समारोह सोमबार शीतलनिवासमै हुने भएकाले उनी परिवारको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै जन्ती बनेर जान लागेका हुन् । पेसाले चिकित्सक निशाकुसुम र अभिषेक बूढानीलकण्ठ स्कुल पढ्दादेखिकै साथी थिए ।
करिब ७ वर्षको प्रेमसम्बन्धलाई दुवै परिवारले स्वीकारेपछि उनीहरूबीच माघ ३ गते विवाह हुन लागेको हो । राष्ट्रपतिका प्रेससल्लाहकार माधव शर्माका अनुसार सोमबार बिहान ९ बजेर २० मिनेटमा जन्ती शीतलनिवास पुग्नेछन् । साढे नौ बजे स्वयम्बरको कार्यक्रम छ । त्यसपछि जग्गेको कार्यक्रम सुरु हुनेछ । करिब एक घन्टामा विवाहका सबै विधि पूरा हुने अनुमान राष्ट्रपति सचिवालयले गरेको छ । विवाह कार्यक्रम संक्षिप्त हुने पनि प्रेस सल्लाहकार शर्माले बताए ।
हिन्दु विधिअनुसार सम्पन्न हुने विवाहमा कन्यादान र गोडा धुने कार्यक्रम राखिनेछैन । ुविवाह विधि हो, दान होइन । त्यसकारण कन्यादान कार्यक्रम हुँदैनु, शर्माले भने । समाज सुधार ऐनअनुसार ५१ जनाभन्दा बढी जन्ती नल्याउन राष्ट्रपति कार्यालयले दुलहा पक्षलाई आग्रह गरेको छ । त्यसमा ब्यान्डबाजाको संख्या भने समावेश हुनेछैन । विवाह भएकाले जन्तीमा बाजा ल्याउने सहमति भने दुवै पक्षबीच यसअघि नै भएको छ । जन्ती र घरपक्ष गरी करिब एक हजार पाँच सयजना वैवाहिक समारोहमा सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । सहभागीका लागि दिवाभोजको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसको जिम्मा कार्की पार्टी प्यालेस क्याटरिङले पाएको छ । उसले सबै अवस्थालाई ख्याल गरेर दुई हजारभन्दा बढीका लगि भोजको तयारी गरेको छ । भेज र ननभेज गरी दुई दर्जन खानाको परिकार रहने स्रोतले जनाएको छ ।